An-tsary, dian-dRtoa Lalao Ravalomanana tao Analamahitsy, 18 May 2013 – MyDago.com aime Madagascar
An-tsary, dian-dRtoa Lalao Ravalomanana tao Analamahitsy, 18 May 2013
Auteur Solo Razafy*Publié le 18 mai 2013 18 mai 2013 Catégories Politique
6 réflexions sur « An-tsary, dian-dRtoa Lalao Ravalomanana tao Analamahitsy, 18 May 2013 »
18 mai 2013 à 12 h 35 min
Ny ahy ny hevitr’i dada sy neny no andrasako @’izao fandehan/javatra izao fa tena tsy mam-pino
ny zavamisy ankehitriny.
Fa dia tena hatahorana mafy mihintsy ve izany Ravalomanana izany e??.nefa na izany aza dia tsy
tokony HIAKAPOKAPOKA toy izao.
Ka ahoana no fandehany farany ve mijanona sa tsia i Neny???izaho aza matahotra sao SANATRIA
mbola nisy nandika vilana io fanapahan-kevitra KITEMATEMAKA sady tsy mitombona mihintsy anie
ilay izy e????dia i Neny ve dia ho azo halahatra @ deba sy ity domelina be fakofakon-draha iny e?
18 mai 2013 à 13 h 33 min
Izy mivady efa manana ny heviny ê ! Ny antsika izao no ilaina, ary tsara ny mifampidinika !
Ny fantatra dia tsy tongatonga ho azy io « chantage » ataon’ilay Béatrice A. io ! Inona intsony no mahamaika rahatoa ka betsaka no tsy tokony hirotsaka amin’ilay fifidianana ho filoham-pirenena, raha ny Fanambaràna navoakan’ny CPS no tsy maintsy arahana ?
Aza adino fa amin’ny maha mpikarakara sy mpandrindra an’ilay fifidianana an’io CENI-T io, dia anisan’ny voatifitr’ilay Fanambaràna ihany koa ry zareo ! Tsy afaka hiteny ry zareo hoe « lafiny tekinika ihany no anjarany » !
Mba azavao kely aza fady ranavalona izany hoe tsy mitombona hitanao izany ! Momban’ny inona marina moa izy izany ?
Izaho indray dia efa hatry ny ela no nilaza fa rebireben’ny olona fotsiny isika ! Asain’ny olona mifankatia ny anjely sy devoly, mivady ny amboadia sy ny zanak’ondry !
Ny gadralava indray ity no asaina mametraka sy mikarakara ny règlements ao am-ponja, fa ny mpiambina sy ny direketra indray no tsy maintsy manaiky sy manaraka an’izay tian’ireo gadra atao !
Ny ahy dia izao ê : Tsy afaka ampiarina miaraka ilay tondrozotra sy ny Accord de Cotonou !
Zavatra roa mifanipaka ireo, fa ny mahagaga hoy aho dia nahoana no nasaina na noterena hanaraka an’io Tondrozotra tsy alehany io, ny Vahoaka malagasy ?
Satria ve nisy frantsay tafiditra tao anatin’io fanonganam-panjakàna io, ka sao dia hitarika resaka na olana be ??
Hita izao fa na io tondrozotra io aza dia tsy hajain’ny mpanongam-panjakàna akory, ary ny Communauté internationale mody tsy mahita, na tsy miteny sy manasazy ! Dia mbola hiandry inona ny vahoaka vao hietsika ary sahy hiteny hoe : TSY VAHA OLANA IO, NOHO IZANY DIA TOKONY AMPIARINA NY LALÀNA, ARY SAZIANA SY GADRAINA DAHOLO NY MPANONGAM-PANJAKÀNA SY IZAY NANAO RATSY REHETRA ??
Accord de Cotonou sy ny fampiarana ny Lalàna ihany ! Ankaotr’ireo dia lalana mankany amin’ny fahaverezana !
18 mai 2013 à 14 h 11 min
18 mai 2013 à 15 h 57 min
Mba azo lazaina fa miketrika ny hanongam-panjakàna va ireto miaramila ireto, sa ry zareo ireo no tena tandroka hiaro marina ny vozona ? Mijaly loatra mantsy ny vahoaka !
Ary sao dia mba misy fifandraisana amin’ilay famonoana an’ilay jeneraly ity fivoriana ataon-dry zareo ity ?
Ka eto indrindra anie aho no fanina e!
Raha tena izy io fanambarana » Baribary » no azoko hilazana azy io??
Tsy afaka ny hanaiky mihintsy aho ny handaharana an’i Neny @ Deba sy domelina » MBA SANATRIA ».
18 mai 2013 à 20 h 11 min
Mitsidika vetivety fa mandray vahiny !
Ny azo lazaina dia ny hoe asakasak’izay manaiky sy manohana an’io fijery mamohetra io !
Précédent Article précédent : Madio i Neny : Tsy manaiky ny mpanongam-panjakana ho kandidà ny CPS
Suivant Article suivant : An-tsary, Neny tao Ambohidratsimo Talatamaty, 18 may 13